Fiovana sy fanovana… hanarahan-dalàna | NewsMada
Fiovana sy fanovana… hanarahan-dalàna
Par Taratra sur 11/05/2019
Ao anatin’ny fampielezan-kevitra tanteraka amin’ny fifidianana solombavambahoaka izao. Tena misy hevitra voaely sy voarain’ny olom-pirenena tokoa ve amin’izany? Eo ny tsirairay mandini-tena sy mitsara. Mampanontany tena, ohatra, ny hoe: tsy mahalala akory ny kandidà amin’ny distrika misy azy ny maro amin’ny olom-pirenena; eny, na ny andro hanaovana ny fandatsaham-bato amin’izany aza. Nefa eto Antananarivo Renivohitra io, vao mainka ny ambanivohitra lavitra any…
Miara-dalàna ho azy amin’izany, ohatra, ny tsy fahalalana izay hoe adidy aman’andraikitry ny solombavambahoaka. Koa ny kandidà amin’izany aza misy tsy mahalala na tsy miraharaha fotsiny izao izay tena asa takina sy andrasana aminy. Maika ny ho voafidy fotsiny ny sasany? Hany ka manao ny tsy fanao: mandika lalàna amin’ny fampielezan-kevitra; mampanantena ny fanatsarana ny fiainan’ny vahoaka ifotony amin’ny fananganana fotodrafitrasa, hono; mizara fanomezana; manao asa soa…
Hahagaga ve raha tsy tena misy fifandraisana mazava eo amin’ny ankamaroan’ny olom-pirenena ifotony sy ny olom-boafidy toy ny solombavambahoaka, ohatra? Ny vahoaka tsy mahalala ary tsy manam-pinoana na fanantenana fa mety hanova ny fiainany ho amin’ny tsaratsara kokoa izay hoe hofidiny eo; eny, na eo aza ny karazana fanamby sy fampanantenana atao aminy. Izay tsipy kely na fanampiana mbamin’ny fanomezana no andrandrainy, dia izay.
Amin’izany, tsy ilaozan’izay manararaotra ny mpanao politika na ny tsy miankina mirotsa-kofidina hoe hisolo vava ny vahoaka. Efa entim-pahazarana amin’izany? Arakaraka ny fihetsiketsahana no mety hahavoafidy, fa tsy izay foto-kevitra sy karazana volavolana tolo-dalàna hoe haroso holaniana, ohatra. Dia mitohy hatrany ny tsy fanarahan-dalàna, ny gaboraraka… Mandra-pahoviana? Tsy mbola hita aloha izay hoe fanovana sy fiovana, na ny amin’izay ihany aza aloha.
Izay miova no afa-kanova, izay manara-dalàna no afa-kampanara-dalàna… Aiza ho aiza amin’izany ireo kandidà solombavambahoaka amin’izao?